Indlela yokubhala ibali: iingcebiso, amanyathelo kunye namaqhinga okwenza | Uncwadi lwangoku
Ngexesha lokubhalwa, unokucinga ukuba inoveli yinto enzima kakhulu, ngenxa yenani lamagama, amaphepha kunye nangenxa yokuphuhliswa kwebali. Kodwa ukubhala ibali akukho lula ngaloo ndlela.
Ngapha koko, unezinto ezininzi ekufuneka uziqwalasele, kwaye funda ukubhala ibali inokukunceda ubone ukuba kunzima kangakanani (kwaye kulula kangakanani xa ungena ngaphakathi kuzo zonke izinto ezinempembelelo kuzo). Ke, ukuba ufuna ukwazi yonke into ngaphambi kokuba uqale ukubhala, okanye ukuba sele uyenzile kodwa awonelisekanga sisiphumo, nazi izikhokelo zokufumana enye ofuna ukuyibonisa wonke umntu.
1 Lithini ibali
2 Iimpawu zebali
2.3 Inomgca webali omnye kuphela
2.4 Mnye kuphela umlinganiswa ophambili
2.5 Ibali lifutshane
2.6 Yakhelwe ukuba ifundwe ngaxeshanye
3 Ungalibhala njani ibali: Yintoni ekufuneka uyigcinile engqondweni xa ubhala
3.1 Cinga ngombono webali
3.2 Gcina ukungaqiniseki ebalini
3.3 Landela isakhiwo
3.5 Vumela ibali liphumle ngaphambi kokuphononongwa
3.6 Ukuba awuthembi ukuba kulungile ... yifunde
Ibali linokuchazwa njenge Ibali elifutshane elinika ingxelo ngeziganeko ezithile kwaye elijolise ukonwabisa, ukoyikisa, ukuhlekisa ... umfundi. Oku kunokuba kokubini kubhalwe ngomlomo kwaye kubhalwe kwaye, nangona phantse wonke umntu eyinxibelelanisa nabantwana, inyani kukuba abanayo "iminyaka" ethile.
Ibali elilungileyo lelo lithi, xa sele lifundiwe okanye libalisiwe, lisishiye sinemvakalelo emnandi, okanye esoyikeka ukuba into ebesiyifuna luloyiko. Kodwa ukuyifumana yeyona nto inzima kuba ayisiyiyo kuphela ekufuneka ubalise ngeziganeko, kuya kufuneka uvelane nomfundi okanye umphulaphuli ukuze loo mntu afune ukwazi ukuba kwenzeka ntoni ebalini.
Ngokwenyani onke amabali abonakaliswa ngothotho lweengcaciso ezichazayo. Kwaye yeyona nto yahlulahlula kubo, umzekelo, ibali, olunye uhlobo olusetyenziswa kakhulu (ngakumbi ukuqala ngokubhala).
Kodwa, kwimeko yebali, inezinto ezilandelayo:
Sithetha ngebali. Ewe, kukho iingxoxo, kodwa ibali Inenxalenye ebalisayo kunencoko. Kwaye kweli bali, banokukuxelela iinyani eziyinyani okanye ezentelekelelo, kodwa yinto esiyixelelayo, ayisiyiyo ukuba siphila ngokwayo.
Ewe nohayi. Kuba njengoko sele sibonisile ngaphambili, nangona uninzi lwamaxesha amabali enxulumene namabali ayinyani, inyani kukuba banakho ukubalisa iziganeko eziyinyani. Ingxaki kukuba ezi zihonjiswe ngamanqaku amnandi kwizinto eziyinyani.
Inomgca webali omnye kuphela
Ukukuqonda oku, kungcono ukuba unebali eliluncedo, okanye ulikhumbule. Umzekelo, iihagu ezintathu ezincinci. Umxholo webali yinto eyenzekileyo kwiihagu ezincinci. Ngexesha elithile ebalini ikhe yakuxelela into eyenziwe yingcuka, yayicinga okanye yayifuna? Ngaphandle kwenyani yokufuna ukutya amantshontsho eehagu, akukho nto iyaziwayo malunga nesilwanyana, kwaye iyahlangabezana nale mfuneko: leyo jolisa nje kuthotho lweziganeko ezibandakanya abalinganiswa abathile.
Umzekelo, ibali likaCinderella, ngokungafaniyo nefilimu, oku kugxila kuye kuphela kwaye kwenzeka ntoni kuye, ukutsiba ngexesha, ewe, kodwa uhlala egxile kuye.
Mnye kuphela umlinganiswa ophambili
Ngokuqinisekileyo, ngoku uza kundixelela: uthini ngeehagu ezintathu ezincinci? Ewe, kuya kufuneka uyazi ukuba eli bali linenkqantosi yesithathu yeehagu, hayi ezangaphambili, ezizezesibini. Ibali oko akuthethi ukuba inomlinganiswa omnye, baya kuba baninzi, kodwa kubo bonke ingoyena mntu ubandezeleka ngokwenene ngenxa yezibakala ezichaziweyo.
Umzekelo, kwaHansel naseGretel, nguGretel ngenene obalaseleyo, kwaye kuyabonakala xa uHansel esiya ngasemva ngalo mzuzu xa igqwirha limvalela lize limtyise.
Unyanisile. Kuya kufuneka uthobele lo mgaqo kuba ibali alenzelwanga ukuba licinge ukuba liyinoveli, kodwa libali elifutshane.
Yakhelwe ukuba ifundwe ngaxeshanye
Khawufane ucinge xa ​​uqala ukufunda ibali kwaye, embindini, uyeke, uyeke. Xa uyichola kwakhona, iimvakalelo kunye namava okufunxileyo okokuqala afunyanwa kuphela ngokufunda kwakhona, kwaye ilahle umtsalane wayo, ngakumbi ukuba uyaqala ukuyifunda.
Ungalibhala njani ibali: Yintoni ekufuneka uyigcinile engqondweni xa ubhalalo
Ngoku ukuba ulazi ibali ngcono, lixesha lokuba ufunde ukubhala elinye, akunjalo? Ewe, ngenxa yoko, kuya kufuneka uthathele ingqalelo amanyathelo okwenza. Kwaye ezi zezi:
Cinga ngombono webali
Awunakho, njengakwinoveli, ukuqala ukubhala kwaye ubone okuphumayo. Kwaye ngekhe uyenze lonto kuba ubude bunomda kwaye kuya kufuneka ujonge izimvo zakho kumagama, amabinzana kunye nemihlathi echanekileyo.
Ngaphandle koko, elo bali liya kugqibela ngokufumana ixesha elide, kwaye ayisayi kuba libali.
Kwakhona, kufuneka khetha amagama aphathekayo, Sebenzisa kuphela ezo wazi ukuba zibalulekile, ezinegalelo ebalini kwaye ziyasebenza. Konke onokukujonga njengenkcitho kukuba ayinamsebenzi.
Gcina ukungaqiniseki ebalini
Kubalulekile ukuba ulwazi lunikwe kancinci kancinci. Umzekelo, ukuqhubekeka nemizekelo esiyinike yona, eCinderella kuthiwe kancinci kancinci ukuba ungoyena mhle, oyena mhle, onobubele… kwaye kancinci kancinci ubhangqwa nenkosana. Okanye kwiihagu ezintathu ezincinci. Ekuqaleni asazi ukuba bangabantakwabo abathathu, okanye ukuba izindlu zakhiwe ngokwahlukileyo.
Wonke amabali kufuneka alandele isakhiwo: Intshayelelo, iqhina kunye nesiphumo. Oko kukuthi, ukuqala kwebali, ingxaki evelayo, kunye nesisombululo kuloo ngxaki. Isenokuvakala kulula, kodwa ayisiyiyo kwaphela.
Lixesha lokuba ubhale, kwaye siyacebisa ukuba uyenze ngaphandle kokucinga ngokuba uyayigqitha, nokuba ubala kakhulu ... Ke uya kuba nexesha lokuthatha loo miba.
Vumela ibali liphumle ngaphambi kokuphononongwa
Yikholwe okanye ungakholelwa, oku kubalulekile kuba kuya kukunceda ukuba ube nenjongo ngakumbi xa ujonga ibali, ngakumbi kuba ngale ndlela uyakukwazi okubalulekileyo nokungabalulekanga, ukuyifinyeza ukuba bekudala; okanye ukuyandisa xa ubona ukuba kukho into engekhoyo.
Ukuba awuthembi ukuba kulungile ... yifunde
Ngokukhwaza. Awunyanzelekanga ukuba uyifundele nabani na, kunokuba ngokwakho. Kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba, ukuba ukuyifunda kuyakudina, kukho into engalunganga. Ukuba unabantwana, kwaye ibali lilungele bona, zama ukuhlala nabo phantsi kwaye ulifunde ukuze ubone indlela abasabela ngayo. Ngaba bayasasazeka? Ngaba bahamba kakhulu? Ngaba bazolile? Ukuba ayisiyonto ulindelwe ukuba uyenze ngebali, kukuba ayibakholosi, kwaye nangona bengazi ukuba bangayicacisa njani, bayayenza banokukunceda wazi ukuba uyathanda okanye awuthandi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Indlela yokubhala ibali